Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaala Finfinnee – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooIbsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaala Finfinnee
Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaala Finfinnee fi Godina Shaggar Irraa kenname
Qaama murna Afaan Qawween aangoo of harkaa qabuun waraanni uummata keenyarratti banamee fi gochi gara jabeenyaa Hidhattoota humna addaa Amaaraa ,waraana federaalaa fi RIBn uummata keenyarratti raawwatamu dhaabbachuu qaba. Bosonni Oromiyaa Daldala siyaasaa Impaayerri Itoophiyaa gaggeessuuf jecha gubachuu hin qabu.
Akkuma beekamu Impaayera Itoophiyaa keessatti bara dhufaa darbaa dantaa fi fedhiin sabaaf sab-lammootaa hojiirra oolmaa argatee hin beeku. Sirni bulchinsaa abbaa Irree inni tokko isa biran bakka bu’aa lammiilee biyyatti dirqiidhaan bitaa turuu fi ammalleen dirqiin bulchuutti jiraachuun isaa waan wal nama gaafachiisu miti. Haala qabatamaa jiruun Impaayerri Itoophiyaa Sirna moofaa deebisuuf carraaqqii hedduu taasisaa jira. Carraaqqiin sirna moofaa deebisuu kun immoo gaaga’ama lubbuu fi qabeenyaa uummata keenyarraan gahaas jira kana caalaa irraan gahuufis tattaafataa jira. Kanuma Bu’uura godhachuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Magaala Finfinnee fi Godina Shaggar waliin ta’uun ibsa Ejjeennoo qabxii Ja’a(6) qabu baasee jira.
Taatee finxaaleyyii fi hidhattoota waraana federaalaa , RIB fi Humna Addaa Naannoo Amaaraa liyyuu haayilii’n lammiilee keenyarratti raawwatame cimsinee balaaleffanna; duras ni dhaabbanna. Gocha gara jabeenyaa lammiilee keenya irratti raawwatan kana qaamni maqaa Mootummaan afaan Qawween aangoo of irraa qabuu fi hidhattoonni naannoo amaaraa wal ta’uun qondoominaan gocha raawwatan ta’uun kan hedduu nama gaddisiisudha. Mootummaan Abbaa Irree Godinaalee Oromiyaa garaagaraatti sirna moofaa nama nyaata kaleessaa deebisuuf tattaaffii taasisaa jira. Impaayerri Itoophiyaa gam-tokkeef dhaabbatee boo’ichaa fi gammachuu gam-tokkeen itti fufuu akka hin dandeenye jabeessinee Akeekkachiisna. Kanaafuu Impaayerri Itoophiyaa cunqursaa addatti Ilmaan Oromoo irratti raawwatu akka dhaabu cimsinee hubachiisna.
Impaayera shiraa fi qawween ijaaramtee shiraan dhiiga uummattootaa dhangalaasaa jirtuu fi taate qabatamaa jiru ilaalchisee:- Akeeka leellistota seenaa badaa murna kaleessa galmaan gahuuf sabboontota Oromoo hidhuu, Namoota Jajjaboo fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo dadhabsiisu, Jaarmiyaa uummata Oromoo diiguuf carraaquu fi maqaa isaan hin qabne itti moggaasu irraa akka of Impaayerichi akka of qusatuu dhaamna. Dabalataanis haalli Impaayera Itoophiyaa garee tokko itti jajee Saba biraa ittiin ciigga’u fi balaaleffatu daba Sirnaa fi akeeka hin qabne ta’uu hubachiisna. Godaannisa seenaa uummata keenya gobaan horfuun bifa haaraan sirna moofaa nutti hawwuun abjuu ta’uu hubatee akka lammii keenya dararuu dhaabu dhaamna. Yoo kana hin taane gaaga’amaa fi rakkina biyyittii keessatti dhalatuuf gaafatamaan sirnicha ta’uu Uummatni bal’aan akka beeku ergaa keenya dabarsina.
Ajjeechaa lubbuu namoota meeshaa maleyyii, sarbama mirga namoomaa, manca’uu qabeenyaa, gubachuu fi buqqaa’uu Ilmaan Oromoo Godinaalee garaagaraa keessatti ta’e ilaalchisee:- Guutummaan guutuutti qaamni deeggarasa sirna kanaan deeggaramee bobba’ee gocha badii raawwachaa akka jiru Uummatni bal’aan ni beeka. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa kan akka Walloo, Matakkal fi Magaalota Kanneen Godina Walloo kan akka Kamisee, Axaayyee, Harbuu, Arxummaa, Kutaalee Magaalaa xixiqqoo Godina Walloo kan akka Naannoo Walloo “Walloo safar ganda 01” fi “Beselaam Safar” jedhaman keessatti gochi sanyii duguuggaa Ilmaan Oromoo irratti raawwate hedduu kan nama gaddisiisudha. Shira sirni Impaayirichaa xaxeen qabeenyaa fi lubbuu namoota nagaa irratti miidhaa gaheef gadda guddaa nutti dhagahame ibsina. Shirrii fi Dabni impaayirichaa hidhattoota ‘Liyyuu haayilii Amaaraa’ waliin ta’uun uummata keenya Godina Walloo irratti raawwatan hedduu balaaleffanna. Tumsa Impaayirri Itoophiyaa hidhattoota humna addaa ‘liyyuu haayilii naannoo Amaaraa’ bobbaasuun jiraattota irratti raawwaten Sababa Oromummaa isaaniif qofa lubbuu fi qabeenya isaanii dhabani. Qe’ee fi qabeenyi isaanii barbadaa’e. Akka fakkeenyaatti Magaaluma Axaayyee keessatti Hojjettoota Wisdom Baankii fi Abbaay Baankii Sababa Oromummaa isaaniif qofa adda baafamanii ajjeefamaniif gadda nutti dhagahame ibsina. Gochoota kanniin irraa Humnoonni badii “liyyuu haayilii naannoo Amaaraa” ammas Oromoo fi Oromiyaatti aggaammii isaanirra akka of qusatan beeksifna. Sirni kun ammaas haalan Lola sabaa fi Saba gidduutti fakkeessun namoota jajjaboo miidhuun, kaan hidhuun, kaan immoo maqaa balleessuun lammiilee nagaa miidhaa jiraachuun ifa. Kana hubachuun Hawaasni bal’aan waan kana dura dhaabbachuu akka qabu hubachiisuu feena.
Dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi Abbootii Qabeenya Oromoo Akkasumas Hawaasa bal’aan:-Dhiibbaa halagaa uummata keenya irratti raawwatamu dura dhaabbachuun dirqama Seenaati. Dhiibbaan hedduun dhaabbilee siyaasaa irraas ta’e Abbootii qabeenyaa keenya irratti taasifamaa turee fi jiru guddoodha. Danqaaleen hangam jiraatanis hojii Boonsaa hojjechaa turuun isaanii ni yaadatama. Haaluma baratameen tooftaa fi mala garaagaraatti gargaaramuun Aantumaan saba keessan cinaa akka dhaabbattan; hubannoo fi akeeka fuula duraaf tumsa lammii keessaniif akka taasistan kabajaan isin gaafanna. Yeroon keessa jirru yeroo itti Namni Eenyummaa isaaf jecha bahee galuu dadhabe waan ta’eef Gocha farreen badii kana fashaleessuu keessatti qooda keessan akka bahattan dhaamsa keenya kabajaa isiniif dabarsuu feena.
Ajjeechaa Godina Lixa Wallaggaa Ona Baabboo Gambeelitti Raawwate Ilaalchisee:- Ajjeechaa Godina Lixa Wallaggaa Ona Baabboo Gambeel kan raawwate qaama afaan Qawween maqaa Mootummaan aangoorra jiruun kan bobbaafaman tahuus mirkanaayeera .Faallaa Dabaa fi taphni lubbuu namaa irratti siyaasa isaanii qajeelchuuf Mootummaan taasisu hedduu kan nama gaddisiisudha. Muuxannoo shira xaxuu qabaniin dhugaa sabaa gara dabarsuuf yaaluun daba dabalataati. Akkaataa Miidiyaalee murna Mootummaa ofiin jedhuuf gabaasa tolutti ta’e jedhame qaama mootummaan kan raawwatame malee gocha kan raawwate warra sirnicha bayyanachiisuu barbaadu ta’uun ifa. Murni maqaa Mootummaa fi Miidiyaan isaanii jibbinsa sabichaaf qaban irra deddeebbiin wayita dubbatantu mul’ata. Gochi kun Gocha Uummata keenya Walloo fi naannoosheetti raawwate dagachiisuuf shira sirni nama nyaata kun rawwaate ta’uu Diinnii fi firri akka hubatu himne. Gochi Godina Lixa Wallaggaa Ona Baabboo Gambeel qaamota mootummaan sabaa fi saba gidduutti garaagarummaa uumuuf dalagame. Aangoo of harka bulfannaaf shira qindaa’ee uummata nagaa irratti raawwate malee Qaamni uummata miidhe kan biraan akka hin jirre Jabeessinee hubachiisna.Taatee badii raawwatanii faallaa maqaa qaama biraatti haqachuuf carraaquun yakka lammataati. Kana irratti uummannii fi miidiyaaleen waan murna maqaa mootummaan aangoorra jiru afarsu fuudhanii gabaasuun gaafatama seeraa fi seenaa ta’uu hubatanii hojii isaanii qixaan akka bahatan hubachiisna.
Gubachuu Bosona Oromiyaa Bakkee garagaraa Ilaalchisee:- Mootummaan Abbaa hirree dabaa fi shiraan qabeenya Uumamaa qisaasessaa jiraachuun beekamaadha. Bosonni Oromiyaa bakka garagaraatti ta’e jedhamee itti karooruun gubachaa ture, jira. Taateen Bosona Oromiyaa gubuu kun daba sirni abbaa Irree raawwataa jiru ta’uun ifa. Duulli Bosona gubuu biyyaa fi naannoo Oromiyaatti Beelaaf gadadoo hawwuu akka ta’e Uummatni Oromoo hubachuu qaba. Lollii fi qisaasa’uun qabeenya bosonaa hawaasicha gama hundaan dadhabsiisanii bituuf abjuu qaban raawwachuu irratti argamu. Sirni Bosonatti ibidda qabsiisee gubu namaafis nagaa fi tasgabbii uumuuf fedhiif akeeka akka hin qabne Uummatni Oromoo hubachuun qe’ee fi qabeenya isaa Ilmaan isaa waliin ta’uun akka tifkachuu qabu hubachiisna. Mootummaan gocha kana raawwatus guutummaan guutuutti akka dhaabu cimsinee akeekkachiisna. Hawaasni Keenya bal’aan, Qotee bulaan keenya Bosona kunuunsaa turee wayita Bosonni gubatu arguun hedduu kan nu gaddisiise ta’uu dhaamna. Kanuma xiyyeeffannoo keessa galchuun mootummaan gochoota kana hunda dhaabuu baannaan balaan as deemu hamaa fi ulfaataa ta’uu hubachiisna. Bosonni Mana, Manni Galma, Galmi Jireenyaaf faayidaa gita hin qabne qaba. Dabalataan Bosonni Qabeenya, qabeenyi dawoo/gaaddisaa fi bu’uura madda galiiti. Kanaafuu Gochi Bosona gubuu fi taateen ilma namaa irratti raawwataa jiru; Lubbuu fi qabeenya mancaasuu akka dhaabbatu cimsinee Akeekkachiisna.
Xumurarrattis Uummatni Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Hawwanii fi Abbootiin, Barsiisaa fi Barataan, Hayyuu fi Ogeeyyiin roga hundaan jirtan Qeerroo Bilisummaa Oromoo Cinaa dhaabbachuun taatee fi gocha Oromoo fi Oromiyaa weeraruuf kaayyeffame dura akka dhaabbattan waamicha keenya Kabajaa isiniif dhiheessina!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaala Finfinnee fi Godina Shaggar!
Ebla 2, 2021